Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Kambôdza » Ahoana ny fomba hitsidihana an'i Kambodza indray?
Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Kambôdza • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Manokatra tsikelikely ny toerana fizahan-tany amin'ny faritra rehetra manerana izao tontolo izao izao tontolo izao. Ny fanokafana indray dia mikendry ireo mpitsidika efa vita vaksiny tanteraka. Kambodza no firenena farany nanao fanambarana toy izany tamin'ny alahady.
Ny Minisiteran'ny Fahasalamana Kambodza tamin'ny 14 Novambra 2021 dia namoaka fanambarana an-gazety ofisialy manamafy fa tsy misy fepetra takiana amin'ny fanaovana confinement ho an'ireo mpandeha vita vaksiny tanteraka.
Tao anatin’ny fanambarana dia nampian’ny minisiteran’ny Fahasalamana fa na dia tsy misy fepetra takiana amin’ny fanaovana vaksiny aza dia misy adidy ny maka santionany amin’ireo mpandeha tonga amin’ny fampiasana fitaovana fitiliana haingana.
Nohamafisin’ny fanambarana ihany koa fa, ho an’ireo tsy mbola vita vaksiny, 14 andro ny fanaovana confinement sy ny fanaovana santionany amin’ny PCR, tsy misy fepetra manokana ho an’ireo izay efa vita vaksiny.
Namoaka fanambarana an-gazety ny Minisiteran'ny Fahasalamana taorian'ny fanapahan-kevitry ny praiminisitra Hun Sen tamin'ny alalan'ny hafatra am-peo hampitsaharana ny fepetra takian'i Kambodza ho an'ireo mpandeha tonga efa vita vaksiny tanteraka.
Nanampy ny minisiteran'ny Fahasalamana fa ireo mpandeha izay efa vita vaksiny tanteraka ary ao anaty confinement amin'izao fotoana izao any amin'ny ivon-toeram-pitsaboana, trano fandraisam-bahiny ary trano manerana ny firenena ary tsy voan'ny COVID-19 dia avela hiala amin'ny confinement manomboka ny 15 Novambra 2021. .
Dikanteny tsy ofisialy momba ny fepetra vaovao dia eto ambany:
Fahazoan-dalana ho an'ireo mpandeha efa vita vaksiny tanteraka amin'ny COVID-19 hiditra ao Kambodza nefa tsy mila confinement
1. Ireo mpandeha efa vita vaksiny tanteraka amin'ny COVID-19 ary tonga any Kambodza amin'ny alàlan'ny fiaramanidina, an-dranomasina ary an-tanety dia tsy maintsy mitondra:
- Taratasy momba ny vaksiny, izay manamarina ny vaksiny COVID-19, ny fatra fototra feno ary ny fanamarinana.
- Fitsapana COVID-19 (PCR) manankery mandritra ny 72 ora azo alohan'ny hahatongavana any Kambodza, eken'ny manampahefana ara-pahasalamana ao amin'ny firenena voakasik'izany.
Rehefa tonga any Kambodza ny mpandeha dia tsy maintsy manao fitiliana haingana (Rapid Test) COVID-19 eo amin'ny fidirana ao amin'ny firenena ary miandry ny valin'ny fitsapana mandritra ny 15 ka hatramin'ny 20 minitra.
Rehefa nahazo valim-panadinana COVID-19 ratsy ilay olona, ​​dia afaka mandeha malalaka manerana an'i Kambodza ilay olona, ​​na inona na inona faritra na faritany, ary tsy voatery ho voatokana.
2. Ho an'ireo mpandeha tsy vita vaksiny COVID-19 ary mandeha mankany Kambodza, dia tsy maintsy mandalo ny fitiliana COVID-19 amin'ny alalan'ny masinina PCR izy ireo ary manao confinement mandritra ny 14 andro araka ny fepetra manan-kery.
3. Ireo mpandeha efa vita vaksiny tanteraka amin'ny COVID-19 ary manao vaksiny amin'izao fotoana izao any amin'ny foibe fanaovana vaksiny, trano fandraisam-bahiny ary trano rehetra manerana ny firenena ary tsy voan'ny COVID-19 dia mahazo miala amin'ny confinement manomboka ny 15 Novambra 2021 ho avy.
Fanazavana fanampiny momba ny fizahantany any Kambodza.